Izindaba - Hola Pump Fluid Syringe For Electrospinning Futhi Yini I-Electrospinning Esetshenziselwa yona
Hola Pump Fluid Syringe Pump Ukuze Electrospinning Futhi Yini Electrospinning Isetshenziselwa
I-Electrospinning iyindlela elula futhi eguquguqukayo yokulungiselela ama-nanomaterials, ancike ekucindezelweni kwe-electrostatic phakathi kwamacala angaphezulu ukuthola ama-nanofibers aqhubekayo kusuka kuketshezi lwe-viscoelastic. Okwamanje, izinto ezahlukahlukene zilungiselele ngempumelelo ama-nanofibers ngamadayimitha asezingeni eliphansi njengamashumi amashumi ama-nanometer nge-electrospinning, kufaka phakathi ama-oxide ensimbi, ama-polymeri ezinto eziphilayo nezinto zokwenziwa ngobumba. Ngokungeziwe kuma-nanofibers aqinile anezindawo ezibushelelezi, i-electrospinning nayo ilungele ukulungiselela ama-nanostructures ngama-morphologies akhethekile anjengezinhlaka ezinamathele, ezingenalutho, eziyigobolondo noma zomgogodla. Ubuso noma ingaphakathi lama-nanofibers anjalo lingaqhubeka lisebenze ngesigaba sesibili noma ama-nanoparticles ngesikhathi noma ngemuva kwenqubo ye-electrospinning. Ngaphezu kwalokho, ama-nanospibers ama-electrospun angaqoqelwa kuhlu olu-odiwe noma isakhiwo esigqinsiwe ngokusebenzisa ukuhleleka kwawo, ukustaka, noma ukusonga, futhi ama-nanofibers ama-electrospun anezinzuzo zama-pores amancane, i-porosity ephezulu nendawo enkulu ethile ebanzi. Isetshenziswe emikhakheni eminingi njengokuvikelwa kwemvelo, ukulethwa kwezidakamizwa, ubunjiniyela bezicubu kanye nemithi yokuzivuselela, izindwangu ezihlakaniphile, izikhuthazi, izinzwa, ukuvuna amandla / ukuguqula / ukugcina, i-biomedicine njll.
Ipompo yesirinji ye-Lead Fluid yakhiwe yimoto enembayo, idrayivu yunithi, induku yesikulufa, ibhulokhi yokucindezela kanye nebakaki elungisiwe, njll., Elingaya emuva naphambili.
Ibhlokhi yokuxhuma ixhunywe nenduku yokuphusha yesirinji ukusunduza noma ukudonsa i-piston, ukuze kutholakale ukudluliswa kuketshezi okunemba okuphezulu, okushelelezi nokungahambi kahle.
Hola ipompo yesirinji ye-Fluid laboratory yamandla aphezulu we-electrospinning, Ipompo yesirinji ye-lead Fluid ephezulu-ngokunemba ingafakelwa isipetu esinamandla we-10 uL kuye ku-60 mL. Ine-1, 2, 4, ne-10 imigudu ongakhetha kuyo, ifinyelela ibanga elilodwa lokugeleza kwesiteshi eliyi-0.184nl / min — 83ml / min. Ukudluliswa okuzinzile.
Imodeli yesithenjwa enconyiwe:
I-TYD01-01, ipompo yesirinji yesiteshi esisodwa）
I-TYD01-02, ipompo yeziteshi ezimbili zesirinji）
I-TYD03-01, ipompo yesiponji yesiteshi esisodwa ngokunemba okuphezulu
I-TYD02-10, iziteshi eziyishumi zepompo yesirinji)
Iphampu yesirinji ye-laborotary ingahlanganisa usayizi ohlukile wesirinji, khetha imodi yokusebenza ehlukile ngokuya ngemfuneko.
Ukucaciswa okuphezulu kombala we-LCD, ukusebenza kwesikrini sokuthinta okulula nokusetha kwemingcele.
Amalambu amaningi akhombisa ngokusobala isimo sokusebenza kwawo, nezinhlobonhlobo zesirinji eyakhelwe ngaphakathi elula ukukhetha abathengisi nokucaciswa.
Prestore multigroup yedatha ukuhlangabezana nezidingo zokugeleza kokuhlola okuhlukile.
Ibuye inezinhlangano zokulawula ngokunemba nokuvikela okuphezulu kanye nomshini we-alamu.
Ukusekela ukuxhumana kwe-RS485, okuhambisana ne-MODBUS protocol, futhi kungakha uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo ngamakhompyutha, ama-PLC, namakhompyutha we-single-chip.
Ibhantshi eligcwele lensimbi, ukufakwa kwamandla okubanzi okuhlukahlukene, ukuzivumelanisa nezikhathi ezahlukahlukene.
Kusebenza ukudluliswa kwevolumu ye-micro fluid, ukugeleza kokugeleza okuncane, akukho ukuhanjiswa kwe-pulse.
Yini i-electrospinning esetshenziselwa yona?
Eminyakeni yakamuva, ngocwaningo oluqhubekayo olujulile lwethiyori ye-electrospinning, ubuchwepheshe be-electrospinning sebuthole ukunakwa emikhakheni eminingi yocwaningo, ikakhulukazi emkhakheni we-biomedicine, isitoreji samandla, ukuhlanzwa kwemvelo kanye ne-catalysis. I-Electrospinning Ngenxa yezinzuzo zayo eziningi, ubuchwepheshe buye baba ubuchwepheshe obubalulekile ekulungiseleleni ama-nanomaterials ohlangothini olulodwa. Isicelo emkhakheni wezokuphathwa kwemvelo, ama-nanofibers kagesi asetshenziswe kakhulu ekuhlanzeni kwendle, ukuhlanzwa komoya nokuhlunga kwezinto eziphilayo, njll. nezithako ezisebenzayo zemithi yendabuko yamaShayina.
I-Baoding Lead Fluid Technology Co, Ltd. igxile ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekwenziweni nasekukhangisweni kwamaphampu e-peristaltic namaphampu wesirinji ngokunemba, futhi izibophezele ekuhlinzekeni abasebenzisi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe eziphelele. Ngaphezu kokuba nochungechunge oluphelele kakhulu lwamaphampu e-peristaltic kanye nemigqa yomkhiqizo wepompo wesirinji, i-Lead Fluid nayo inganikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso ze-OEM ngokuya ngezidingo zomsebenzisi. Ukuhlangenwe nakho okuphelele nokuvuthiwe komkhiqizo we-Lead Fluid kungakunika ukuqondiswa kwesicelo esisheshayo neziphakamiso zamaphampu e-peristaltic namaphampu wesirinji, futhi kunikeze abasebenzisi izixazululo zokudlulisa uketshezi ezisezingeni eliphakeme, ezisezingeni eliphakeme, nezingabizi kakhulu.
Isikhathi Iposi: Jun-02-2021